3 Joany 1 - Ny Baiboly
Epistola Fahatelon'i Md. Joany
3 Joany toko 1
Fiderana an'i Gaiosa - Faniniana an'i Diotrefesa sy fiderana an'i Demetriosa.
1Izaho anti-dahy, mamangy an'Gaiosa malala, izay tiako araka ny marina. 2Ry malala, iriko ho toraka ny an'ny fanahinao koa ny fanambinana ny raharahanao rehetra amam-pahasalamanao. 3Faly loatra aho, fa nisy rahalahy tonga nanambara ny fahamarinanao, na ny andehananao araka ny fahamarinana. 4Tsy misy mahafaly ahy mihoatra noho ny mandre fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako.
5Ry malala, tsara tokoa ny ataonao rehetra amin'ny rahalahy, fa indrindra amin'ireo vahiny; 6ka nambaran'izy ireo teo anatrehan'ny Eglizy ny fitiavanao namana. Ary tsara raha mamatsy azy araka ny mendrika an'Andriamanitra hianao, amin'ny fandehanan'izy ireo; 7fa ho voninahitry ny Anarany no nandehanan'izy ireo, ka tsy nandray na inona na inona tamin'ny jentily izy. 8Tsy maintsy manohana ny olona toy ireny isika, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana.
9Nanoratra kely tamin'ny Eglizy aho, nefa tsy te-handray anay Diotrefesa izay te-ho lohan'izy ireo. 10Ka rahefa tonga aho dia hopotsiriko ny nataony, sy ny bedibedy foana anaratsiany anay. Sady tsy afa-po amin'izany ihany izy; fa ny tenany, tsy mandray ny rahalahy; izay te-handray ireo koa, sakanany sy roahiny amin'ny eglizy.
11Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka, fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra; fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra.
12Milaza soa an'i Demetriosa ny olona rehetra mbamin'ny fahamarinana aza; izahay koa milaza izany, ary fantatrao fa marina ny filazanay.
13Manan-javatra maro hosoratana aminao aho, fa tsy tiako atao amin'ny ranomainty sy ny penina izany. 14Fa manantena hahita anao faingana aho, ka dia hiresaka mifanatrika isika. 15Ho aminao anie ny fiadanana.
Manao veloma anao ny sakaizantsika. Veloma any amin'ny sakaizantsika tsirairay avy. >